जोखिम मोलेर डुङ्गाको यात्रा
२०७५ श्रावण २३ बुधबार
धनगढी, २३ साउन -
जब पानी पर्न थाल्छ, खोलापारी र वारी बसोवास गर्नेहरुको मनमा ढयांग्रो बज्न थाल्छ, कारण, खोलावारीपारी गर्न एउटै माध्यमबनेको छ डुंगा । वर्षायाम शुरु भएसंगै भजनी नगरपालिकाका वडाहरु ५, ७ र ९ मा बसोबास गर्नेहरुको दिनचर्या नै परिवर्तन हुने गर्दछ ।
ति वडामा बसोबास गर्नेहरुको ज्याला मजदुरी देखि औषधीमुलो र शैक्षिक गन्तव्य हो भजनी बजार । जहाँ आउनजान डुंगाको प्रयोग अनिवार्य छ । पुरानो रपानी फालिरहनु पर्ने डुंगाबाट ओहोरदोहर गर्दा कतिबेला के हुने हो भन्ने चिन्ताले सधै पिरोल्ने गरेको भजनी नगरपालिका ५ की कल्पना साउँदले बताईन् ।उनी उच्च शिक्षाका लागि हरेक दिन यही खोला यही डुंगाबाट तर्न बाध्यछिन ।
उनी कक्षा ८ मा पढ्दै गर्दा कान्द्रा नदीमा पुल बन्दैछ भनेर सुनेपछि कम्ता खुशी भएकी थिईनन् । तर पुल बन्ने सुनेको पनि ६÷७ वर्ष भैसक्यो, ठेकेदारले पुलत के पिल्लर सम्म पनि नउठाएको देख्दा सरकार नभएको महशुस भएको कल्पनाले सुनाईन् । उनले अगाडि थपिन –‘के हाम्रो पुल तरेर वारीपारी गर्नेसपना पूरा होला ।’ के साच्चै समयमा काम न गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने कुनै निकाय छैन ? उनले प्रश्न गरिन ।
कान्द्रा नदीमा समयमा पुल नबन्नुमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र यस क्षेत्रका राजनैतिक दलका नेताकार्यकर्ताहरु दोषी देख्छन भजनीका पत्रकार जयबहादुरबुढाले भने । उनी अगाडि थप्छन्, –‘आफ्नो क्षेत्रमा भएगरेका विकास निर्माण हुन वा अरु कुनै काम उनीहरुले (स्थानिय जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दलकानेताकार्यकर्ता) चासो दिनु पर्दैन ? ७÷७ वर्ष सम्ममा पनि जाबो एउटा पुल बनाउन नसक्नेबाट यहाँका जनताहरुले अरु के अपेक्षा गर्ने’ उनी आक्रोश पोख्छन्।
नदीमा पुल नहुँदा सबैभन्दा बढी मार विद्यार्थीहरुलाई पर्ने गरेको स्थानीय शिक्षक मानबहादुर साउँदले बताए । उनले बर्षातको ३ महिनासम्म विद्यार्थीहरुपढाईबाटै बञ्चित हुने अवस्था रहेको बताए । पानी परिरहेको बेलामा डुंगा समेत नचल्ने हुँदा खोला किनारमा बसेर घर फर्कनुको विकल्प विद्यार्थीहरुसंग नरेहेको उनले सुनाए । पुलका बारेमा आवाजउठाईदिनु प¥यो भनेर स्थानिय जनप्रतिनिधी लगायत राजनितिक दलका नेताहरुलाई पटक÷पटक समस्या राखे पनि कसैले सुनुवाई नगरेको शिक्षकसाउँदले गुनासो गरे ।
भजनी नगरपालिकाकी उपमेयर छायाँ देवकोटाले वर्षा शुरु भएपछि धेरै समस्या हुने गरेको सुनाईन् । उनले कान्द्रा नदिमा निर्माणाधिन पुलका विषयमाआफुले पटक–पटक कुरा उठाएको भएपनि सम्बन्धित पक्षले चासो नदेखाएको बताईन् । उता हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख मनिष कुमार झाले पुल निर्माणमा ठेकेदारले लापरवाही गरेको स्वीकार गरे । उनले पुलको डिजाइन परिवर्तनभएका कारण केही समय ढिलो भएपनि असार मसान्तसम्म पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि म्याद थप गरिएको बताए । यद्यपि, असार मसान्त पनि सकिएकोबताउँदै उनले ठेकेदारले सोझै केन्द्रमा म्याद थपका लागि निबेदन दिएको सुन्नमा आएको बताए ।
२ वर्षको ठेक्का लिएर २०६८ जेठ ३१ गतेदेखि काम सुरु गरेको लामा शेर्पा जेभी प्रालीले २०७० मंसिर मसान्त सम्ममा पुलको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने होतर बिभागबाट पटक पटक म्याद थप गरेपनि ठेकेदारले अहिलेसम्म पुलको २५ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न गरेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
हुलाकी सडक आयोजना अन्तर्गत ३ करोड ४५ लाख २० हजारको लागतमा २०६८ साल जेठ ३१ गते २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेकोलामा शेर्पा जेभीले सम्झौता मिति सम्पन्न गर्दासम्म कामको सुरुवातनै नगरेको स्थानियहरु बताउछन् । पहिलो मिति सकिएपछि म्याद थप गरी निर्माण सुरुगरेको लामा शेर्पा जेभीले थपेको समय पुरा भई अरु ५ वर्ष बित्दासम्म २५ प्रतिशतपनि काम गर्न सकेको छैन ।